Views | News Filmy | Page 3
त्यो फाटेको मन, मनैले सिउनु है गौरी…
चार बर्षको अमेरिका बसाईपछि गौरी मल्ल स्वदेशमै बसोबास गर्ने उद्देश्य सहित नेपाल आउदैछिन् । अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरुको मनमा बस्न सफल गौरीको विदाईमा एक कार्यक्रम समेत न्यूयोर्कमा राखिएको थियो । आमा सिकिस्त भएपछि उनी आज बुधबार रमेश उप्रेतीका साथ अमेरिकाबाट उडिसकेकी छिन् । उनको बिषयमा केन्द्रित रहेर प्रेस चौतारी डटकमका प्रधान सम्पादक प्रशान एलुङ् राईले तयार गरेको यो समय सन्दर्भ विचार पढ्नुहोस् ।
अल विदा शाम्भा तिम्रो सोह्र श्रृंगारलाई अभिवादन ! डा.भट्टराई लेख्छन् : ‘थुप्रै निर्मातासँग शाम्भाले लिनुपर्ने पारिश्रमिक बाँकी थियो’
थुप्रै निर्मातासँग शाम्भाले लिनुपर्ने पारिश्रमिक बाँकी थियो । उनले एक दिन करिव पाँच लाख लिनुपर्ने बाँकी बक्यौताको लिष्ट देखाउँदै भनेका थिए ‘ हेर्नुहोस् न सर , यस्ता यस्ता मान्छेले मेरो पारिश्रमिक दिएका छैनन् । म जस्तो गरीवको खाएर कसैलाई पनि भलो हुँदैन सर । ‘ उनको त्यो दुखेसो आज सम्झादा मात्र पनि मेरो मनमा सूलझै गाडिन्छ । म शाम्भाको पारिश्रमिक चुक्ता नगरेर उसको वहीखातामा नाम चढेका निर्माताहरुको सद्वुद्धिको कामना गर्दै बाँकी बक्यौता गरी दिन अनुरोध गर्दछु । त्यसो गर्नुभयो भने मात्र उसको श्रापको भागिदारीबाट मुक्त हुन सकिन्छ । उनले लिनुपर्ने लिष्टमा सबैभन्दा बढी ६० हजार र कममा ५ हजार थियो ।
राम्रा कृति नराम्रा फिल्म
अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मी जगतमा विभिन्न साहित्यिक कृतिलाई आधार मानेर फिल्म निर्माण गर्ने प्रचलन नयाँ होइन । तर नेपालमा फिल्मसँग नङ र मासुको सम्बन्धको रुपमा व्याख्या गरिने साहित्यिक कृतिहरु भने मुस्किलले एक दर्जन मात्र पर्दामा रुपान्तरित भएका छन् । विषयवस्तुका लागि सधैं विदेशी फिल्मको नक्कल गर्नु भन्दा नेपाली साहित्यका अमर कृतिमाथि क्यामरा चलाए चलचित्र गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भनाई एकातिर छ भने अर्कोतिर साहित्य नै नबुझ्ने जमान सिने क्षेत्रमा छ ।
हिमाल कभर पेजमा करिश्मा /हिरोइन उत्पती र संघर्षको कथा
अग्रणी वीक्ली म्यागजिन हिमाल खबर पत्रिकामा लामो समय पछि फिल्मी सेलेब्सको कभर स्टोरी छापिएको छ । एक दशक अघि महानायक राजेश हमाल र जल शाह त्यस पश्चात गायिका सुक्मीत गुरुङ र मनीषा कोईराला कभर स्टोरीमा अटाएपछि हिमालको नयाँ संस्करणमा करिश्मा कभर स्टोरीमा छाएकी हुन ।
नायिकाले राउटे बच्चालाई नुहाइधुवाई गरिदिए जति मात्रै हो ?
कति चलचित्र पत्रकारले यस्ता महोत्सवहरुको महत्व बुझेर यसलाई आफ्नो सामाजिक दायित्वसँग जोडेर हेरे ? के यो महोत्सव एउटा ब्यावसायिक नेपाली चलचित्रको फस्ट लुक सार्वजनिक गरेजति मात्रै हो ? या एउटी नायिकाले राउटे बच्चालाई नुहाइधुवाई गरिदिए जति मात्रै हो ? या एउटा भारतीय चलचित्रले नेपालमा गरेको व्यापारलाई प्रक्षेपण गरेर नेपाली चलचित्रलाई मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना गर्ने खालको एड्भोटरियलको विषय जस्तै मात्र हो ? अझ रणवीर कपुरको सिक्सप्याक्स महात्म्य जति पनि हैन यो आयोजना ?
राजेश हमालको लागि सबैभन्दा सुहाउँदो जोडी भनेको करिश्मा मानन्धर सितको जोडी हो भन्नेहरु धेरै छन् । हुन पनि साथी, उपकार, ढुकढुकी देखि लिएर केही महिना अघि मात्र रिलिज भएको फिल्म ‘किन -किन ‘ सम्म राजेश र करिश्मा जोडीले धेरैको मन जितिसकेका छन् । उनीहरु बीचको यो केमिष्ट्रीको अद्भूत छ । तर कुनै बेला एकपटक यस्तो पनि भएको थियो कि करिश्मा मानन्धरलाई उनको परिवारले राजेश हमालसित फिल्म खेल्न बर्जित समेत गरिदिए ।
फिल्म नगरिमा चारित्रिक समस्या ?
सुनिश्चित भविष्यको सपना सजाई कयौं युवतीहरु बत्तीमा पुतली होमिए झैं आएका छन् । यो सपनाको विशाल सागरमा डुबेर कति युवती उम्कनै नसक्ने भएका छन् त कति डुब्दै छन् । तर यस गहिराईबाट मोती टिपी फर्कने चाहिँ औलामा गन्न सकिनेजति मात्रै छन् । आमा र श्रीमतीको गहना, घरखेत धितो राख्ने, घरका अन्नपात वा गाईभैसी बेचेर फिल्म बनाउन चाहने निर्माता होस् या दलाली गरी लगानी गर्ने निर्माता होस् चाहे त्यो व्यापारी नै किन नहोस्, सबैको मानसिकता उस्तै छ ।